Ukubuya okuphephile kohambo
Hlala unolwazi ngamacebiso akamuva okunavigeyitha uhambo phakathi ne-COVID-19 nangemva kwakho.
Ukuphendula imibuzo yezivakashi emayelana ne-COVID-19
Funda indlela esikusiza ngayo ngezinhlelo nezinqubomgomo eziguquguqukayo.
Imingcele yokuvakasha yomhlaba wonke
Buyekeza iziqondiso zaBabungazi nezivakashi endaweni yakini noma oya kuyo.
Ukubhukha okuthintwe yi-COVID-19
Ukuqonda izindlela zokukhansela nokubuyiselwa imali.
Ukuhlela kusengaphambili ngokuthula kwengqondo okwengeziwe
Thola indlela yokuhlunga izindawo zokuhlala ezivumela ukukhansela.
Sonke sinomthwalo wokuqikelela ngokuphepha
Sicela umphakathi we-Airbnb ukuba uzibophezele ezinqubweni zethu ezithuthukisiwe zempilo nokuphepha ze-COVID-19.
Izivakashi naBabungazi kumelwe balandele imithetho neziqondiso zendawo ezihlobene nokugqoka izifonyo uma bexoxa.
Ukuqhelelana nabanye abantu
Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna, aBabungazi nezivakashi kumelwe bavume ukuqhelelana ngamamitha angu-2.
Ababungazi emhlabeni wonke bazibophezela enqubweni yethu yokuhlanza esekelwa ongoti, enezinyathelo ezinhlanu.
Hlola izindlela zokuphepha
Imithetho ethuthukisiwe yazo zonke izindawo zokuhlala
Inqubo yethu yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu, esekelwa ochwepheshe ihloselwe okungaphezu kokuhlanza okuvamile futhi iyisinyathelo esibalulekile ekusizeni ekuqinisekiseni ukuphepha komphakathi wethu.
Indawo yakho wedwa, eqhelile esixukwini
Amakhaya abantu. Ukungena endlini ngaphandle kokuthintana. Izindawo ezivulekile zangaphandle. Igumbi elikhulu ngokwanele. Thola izindawo zokuhlala ezinamasevisi abaluleke kunawo wonke kuwe.
Hlola amakhaya abantu aseduzane
Ngazi kanjani ukuthi indlu ilandela iziqondiso ezintsha zokuphepha nokuhlanza?
Kusukela ngo-November 20, 2020, bonke aBabungazi (ngaphandle kwase-China) kwadingeka bazibophezele ezinqubweni ze-COVID-19 zokuphepha nokuhlanza, uma kungenjalo ama-akhawunti abo ayengathola izixwayiso, amiswe okwesikhashana, futhi kwezinye izimo, akhishwe enkundleni ye-Airbnb. Uyakwazi ukubona noma nini ukuthi uMbungazi uzibophezele yini enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe yezinyathelo ezinhlanu - bheka okuthi “Uzibophezele enqubweni yokuhlanza ethuthukisiwe ye-Airbnb” ngaphansi kwengxenye ethi Impilo nokuphepha yekhasi lendlu yoMbungazi. Funda kabanzi mayelana Ukuhlanza Okuthuthukisiwe Kwe-Airbnb.
Uma imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna kanjalo, bonke aBabungazi nezivakashi kumelwe bavume ukugqoka isifonyo noma into yokwemboza ubuso uma bekhuluma nomuntu futhi baqhelelane ngamamitha angu-2. Futhi, situsa nokuba ungabungazi noma uthathe uhambo uma uye wachayeka noma uma unezimpawu ze-COVID-19. Buyekeza Izimfuneko zempilo nokuphepha ezindaweni zokuhlala.
Ungathintana noma nini noMbungazi ngemibuzo ethile mayelana nezinqubo zakhe zempilo nokuphepha ku-app ye-Airbnb.
Ngingashintsha kanjani noma ngikhansele ukubhukha osekukhona kakade?
Uma udinga ukushintsha noma ukukhansela ukubhukha kwakho, vakashela ingxenye ethiUhambo kuwebhusayithi noma ku-app ye-Airbnb ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ngezindlela zakho zamanje zokukhansela. Siye sasungula le nsiza ukuze sisize izivakashi zinavigeyithe izinqubo nezinqubomgomo zokukhansela. Izivakashi ezingakwazi ukuhamba ngenxa ye-COVID-19 ezibhukhe ngomhla ka-March 14, 2020 noma ngaphambi kwawo zingase zifanelekele ukukhansela ngaphandle kwezindleko. Funda kabanzi mayelana nenqubomgomo yethu yezimo ezingalindelekile.
Yiziphi izinqubomgomo ze-COVID-19 ezisungulelwe Okokuzithokozisa kwe-Airbnb?
Okokuzithokozisa kwe-Airbnb kuphindwe kwavulwa emazweni lapho imithetho kahulumeni efanele ivumela khona. Izivakashi naBabungazi kulindeleke ukuba balandele izindlela ezithile zokuphepha ekuzithokoziseni okungokoqobo, okuhlanganisa ukuqhelelana nokugqokwa kwezifonyo lapho imithetho noma iziqondiso zendawo zifuna khona. Futhi-ke, hlala ekhaya uma uye wachayeka ku-COVID-19 noma uma ugula. Funda kabanzi mayelana neziqondiso zezempilo nezokuphepha eziphathelene noKokuzithokozisa.
Uma ungathanda ukuba nokokuzithokozisa neqembu lakho kuphela, ungacabangela ukubhukha okuphrayivethi. Uma uzizwa ungakhululekile ukuhlangana ngamaqembu noma uma okokuzithokozisa okungokoqobo kungakavulwa kabusha emakethe yakho, hlola okokuzithokozisa okuku-inthanethi.
Hlobo luni lwezindlela zokubhukha ezivumelana nezimo ezitholakala ku-Airbnb?
Izinqubomgomo zokukhansela zisethwa aBabungazi, futhi ziyahlukahluka zivumelane nezimo, zingaqini kakhulu, futhi ziqine, kuye ngendlu. Ungathola imininingwane mayelana nenqubomgomo yokukhansela yendawo ngayinye yokuhlala ekhasini eliyinhloko lendlu ngayinye. Sifake isihlungi sokusesha esisha ukuze sikwenzele kube lula ukuthola izindawo ezinezinqubomgomo zokukhansela okuvumelana nezimo. Funda kabanzi ngesihlungi esisha.